Home Wararka Beesha Murusade oo ciidan u diraysa Guriceel & dagaalka ASWJ oo mid...
Beesha Murusade oo ciidan u diraysa Guriceel & dagaalka ASWJ oo mid beeleed isku badalay
Waxa maanta ama ugu danbeeyntii beri la filayaa in ay ka dagaan garoonka diyaaradaha magalaada Dhuusamareeb ciidan ka soo jeeda beesha Murusade oo uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada Dayniile Jacfar. Abaabulkaan ayaa waxa gadaal ka riixaya Senator Dhagdheer iyo Xasan Cali Khyre oo shalay balan qaaaday in beeshooda ay ciidan ku biirinayaan ciidmada la dagalayo ururka Ahlu Sunna Wajameeca.
Go’aankaan ay qaadatay beesha Murusade ayaa waxa uu ka dhigi doonaa dagaalka ka dhanka ah Ururka Ahlu Sunna Wajameeca mid beeleed, iyada oo la filayo in beesha Ceyr ay jawaab adag ka bixin doonto dagaalka kaga yimaada Beesha Murusade.
Ujeedada beesha Murusade dagaalka loo soo galiyay ayaa ah in la muujiyo in beelaha ka soo jeeda Galmudug ay si wadajira ugu soo wada horjeedaan ururka ASWJ. Laakiin dhamaan beelaha kale sida beelaha Mariixaan, Dir, Waceysle, Sacad iyo Saleemaan ayaa ka biyo diiday in ay qayb ka noqdaan dagaalka uu Qoor Qoor Iclaamiyay.